Ultimaker Cura: fampiharana tsara hanomanana modely amin'ny fanontana 3D | Avy amin'ny Linux
Androany mora kokoa ny maka pirinty 3D Noho ny fisian'ireo maodely misy vidiny mora azo idirana ary ahafahanay mitrandraka hahafantatra bebe kokoa momba ny asany ary afaka mamporisika ny tenantsika hianatra hamorona modely 3D antsika manokana.
Fa noho izany dia mila fampiharana izany isika ampio izahay amin'ny famoronana azy ireo ary amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka a safidy tena tsara izay manana ny anarana "Ultimaker Cura".
1 Momba an'i Ultimaker Cura
Momba an'i Ultimaker Cura
Ity iray ity dia fampiharana natao ho an'ny mpanonta 3D, izay ahafahanao manova ny masontsivana fanonta ary avy eo manova azy ireo ho kaody G. Noforonin'i David Braan, izay rehefa afaka kelikely dia hiasa amin'ny Ultimaker, orinasa natokana ho an'ny famolavolana sy fanamboarana mpanonta 3D.
Mba hitazomana ilay rindrambaiko dia natao tamina lisansa LGPLv3 io. Ny fampandrosoana dia atolotra ao amin'ny GitHub. Ny rindrambaiko dia ampiasain'ny mpampiasa mihoatra ny iray tapitrisa manerantany ary iray amin'ireo rindrambaiko fanontana 3D be mpampiasa indrindra amin'ny mpanonta 3D.
Ultimaker Cura'sIzy io dia miavaka amin'ny alàlan'ny fanomezana sehatra misy sary hanomanana modely amin'ny fanontana 3D, IZA Izy io dia ahitsy araka ny maodely ary ny programa dia mamaritra ny scenario amin'ny mpanonta 3D mandritra ny fampiharana milahatra isaky ny sosona.
Amin'ny tranga tsotra indrindra, dia ampy ny manafatra ny maodely amin'ny iray amin'ireo endrika manohana (STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG), safidio ny hafainganam-pandeha sy ny kalitao ary apetraho ny asa fanontana.
Misy plug-in ho fampidirana amin'ny SolidWorks, Siemens NX, Autodesk Inventor, ary ny rafitra CAD hafa. Ny motera CuraEngine dia ampiasaina handikana ny maodely 3D ho an'ny setin'ny torolàlana an'ny mpanonta 3D.
Amin'ireo toetra mampiavaka azy Ultimaker Cura dia manasongadina izao manaraka izao:
Rindrambaiko loharano misokatra cross-platform, misy maimaim-poana tanteraka
Manana karazany roa ny fampiasana azy; tolo-kevitra maody na ampiasao fomba maody hanamboarana fikirana mihoatra ny 300, ho an'ny fibaikoana farany ambony
Ny mombamomba azy namboarina, izay mahatonga ny fikirakirana ny fitaovana sy ny fitaovana ho tsotra sy haingana ary hahatratra vokatra azo antoka sy matihanina
Fanohanana eo noho eo ho an'ny format fisie STL, OBJ, X3D ary 3MF
Fahafahana manitatra ny fampiasa lehibe misy azy amin'ny add-ons
Fahaiza-mitantana fitantanana mpanonta Ultimaker afaka tambajotra iray na maromaro avy amina interface iray
Amin'izao fotoana izao ilay rindrambaiko dia ao amin'ny kinova 4.6.1 izay fanavaozana vonjimaika ho an'ny kinova 4.6 sy manolotra piraofilina vaovao mahazatra manome automativa ny fanitsiana izy amin'ny fiheverana ny fampiasana fitaovana toy ny polycarbonate, nylon, CPE (polystyrene) ary CPE +.
Ho fanampin'izay dia manome ny fampisehoana ny script mavitrika ho an'ny fanodinana aorian'ny sy ny interface nanampy fanitarana hanitarana ny lavaka rehetra amin'ny alàlan'ny fanonerana offset isaky ny sosona, mamela anao hampitombo na hampihena ny lavaka hanonerana ny fanitarana marindrano. Ao amin'ny fikandrana mialoha, ampiana ny fahaizana manao mangarahara ny fitaovana fanampiana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ultimaker Cura: fampiharana tsara hanomanana modely amin'ny fanontana 3D
Fantatrao ve misy rindranasa fanahafana ny linux fa ho an'ny cnc?